Maine Credit Union Faa'iidooyinka Cashuur xareynta Hore - Amjambo Africa
Sida laga soo xigtay Adeegga Dakhliga Gudaha (IRS), qiyaas ahaan saddex meelood meel dadka Mareykanka ah waxay sugaan illaa daqiiqadda ugu dambeysa ee ay soo xareeyaan canshuurta federaalka. In kasta oo u janjeeraan, waxaa jira sababo badan oo hore loogu xareeyo canshuuraha. Xaqiiqdii, waxaa la joogaa waqtigii dadku qodi lahaayeen rasiidhadaas oo ay dokumintiyada wada ururin lahaayeen – halkan waxaa ku yaal shan sababood oo lagu xareeyo horaantii 2021
Ref Lacag celinta degdegga ah.
Haddii qof uu filayo lacag celin, waxay u badan tahay inuu si dhakhso leh u helo haddii ay goor hore fayl gareeyaan. Tani waa sababta oo ah IRS kuma mashquulsan Janaayo, Febraayo, ama Maarso sida ay tahay bisha Abriil. Dad badan ayaa u muuqda inay dib u dhigaan, sidaa darteed waxaa jira tartan yar marka hore ee la xareeyo. Qaabka ugu dhaqsaha badan ee loo helo lacag celin – feyl ahaan feyl ahaan u samee, isla markaana dib u soo celintaada si toos ah loogu shubo koonto iyadoo la adeegsanayo deebaaji toos ah. Waxay qaadan kartaa dhowr toddobaad in ka badan si laguugu soo celiyo warqad.
Marka Hore Kaalay, Marka Hore U Adeeg
Jadwalka xisaabiyeyaasha cashuuraha ama xirfadlayaasha cashuuraha si dhakhso leh ayey u buuxsamaan, markaa waxa fiican in aan la sugin muddo dheer in mid la shaqaaleeyo. Haddii cashuur bixiye uusan kalsooni buuxda ku qabin sida loo xareeyo canshuurahooda, shaqaaleynta xirfadle canshuurta ayaa kaa caawin kara. Qaar badan ayaa lacag qaata, laakiin faylasha faylasha mararka qaar waxay helaan wax ka badan intii ay dib ugu soo celiyeen qaab lacag celin ah. Xirfadlayaasha cashuuraha sidoo kale waxay bixiyaan hagitaan cashuureed sanadka oo dhan, la soco wixii ku saabsan sharciyada canshuuraha ee la badalayo, waxay u helaan macaamiishooda macaamiil cashuur dhimis yar,Iyo inbadan. Markaad dooranayso qof kaa caawinaya canshuuraha, waxaa lagula talinayaa inay dadku raadsadaan Xisaabiyeyaasha Dadweynaha ee Shahaadaysan (CPAs) ama Wakiilka Diiwaangashan (EA.) EA waa xirfadle cashuur oo ay shati ka heshay IRS iyada oo loo marayo imtixaan isqoritaan gaar ah ama ka dib markay u shaqeyso IRS shan sano
Ka Hortagida Xatooyada Aqoonsiga
Sida laga soo xigtay Xafiiska La Xisaabtanka Dowlada Mareykanka, IRS waxay bixisay in ka badan $ 3.1 bilyan shaqsiyaadka gudbiyay celinta been abuurka ah iyagoo adeegsanaya macluumaadka aqoonsiga kuwa kale dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Isla marka dambiile helo marinka Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti ee qof, waxay geysan karaan waxyeelo badan. Haddii qof khiyaano sameeya uu fayl garaysto lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti ee qof intaanu samayn ka hor, IRS way diidi doontaa soo noqoshada dhibbanaha, tan iyo markii diiwaanadu muujinayaan inay horeba la bixiyay. Xaqiiqdii, ma aysan helin wax lacag ah, laakiin dambiilaha ayaa helay. Waxay qaadan kartaa bilooyin in tan looga nadiifiyo IRS. Marka waxaa lagugula talinayaa inaad goor hore xareysid canshuuraha, lagana hor istaago kuwa wax khiyaameeya inaad si guul leh u xareyso soo celinta khiyaanada.
Waqtiga Bufferka Dheeraadka ah
Haddii cashuur bixiye ay soo food saartay biil cashuur, halkii laga celin lahaa, waxay noqon kartaa isla si muhiim ah in hore loo xareeyo. Qofka hore u fayl gareeya, goor hore ayay ogaan doonaan inta ay le’eg tahay inay bixiyaan dowladda. Sidoo kale, haddii qof uu ku leeyahay canshuuraha gobolka ama federaalka, ma aha inay si buuxda u bixiyaan illaa waqtiga kama dambaysta ah ee diiwaangelinta ee Abriil 15. Waqtiga dheeriga ah ee la samaynayo qorshe iyo qoondaynta lacagta, ay u yar tahay inay ku qasbaan inay ku shubaan sanduuqooda degdegga ah bixinta cashuurta waqtigeeda.
Diiwaangelinta canshuuraha maahan wax lagu farxo oo xiiso leh, iyo in kasta oo dadku rabaan inay dib u dhigaan illaa daqiiqadda ugu dambeysa, ma ahan inay. Wax walba oo ilaa iyo hadda la soo qabtay waxay ku saabsanaayeen lacag, laakiin maxaa xitaa ka muhiimsan lacagta? Jawaabta qofka wanaagiisa. Diiwaan gelinta hore waxay kaa caawin kartaa baabi’inta walwalka waqtiga kama dambaysta ah ee canshuurta.
PreviousCPort Isu abaabulka iyo xareynta
NextAfrica iyo COVID-19 talaalada